Faah gaahin:-Qarax uu ka badbaaday Wasiir oo ka dhacay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax xoogan oo xalay ka dhacay agagaarka Isgoyska Ceeb-gaabta ee degmada Xamar-Jajab ee Gobolka Banaadir gaar ahaan Bar koontarool oo ku dhow Xarunta Madaxtooyada.
Qaraxaas ayaa qeybaha hore ka haleelay gaariga Wasiirka beeraha Xukuumadda Soomaaliya, balse ma geysan khasaare ka badan burbur xoog leh oo soo gaaray gaariga, sida ay sheegeen Goobjoogayaal.
Sidoo kale dad lala hadlay ayaa sheegay in qarax kadib Ciidanka ammaanka oo ku sugnaa Koontaroolka Madaxtooyada ay rideen rasaas dhowr ah, isla markaana uu hakad galay isku socodka gaadiidka iyo dadka.
Wadada uu ka dhacay qaraxaas, waa tan kaliya ee sida aadka ah ay u isticmaalaan mas’uuliyiinta dowladda, gaar ahaan Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhaq-dhaqaaqiisa magaalada uu xadidanyahay.
Maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa Magaalada Muqdisho aad ugu soo badanayey qaraxyada miinada ah ee dhulka lagu aaso ah, waxaana inta badan qaraxyadaas Mas’uuliyadooda sheegtay Al-shabaab.